ပညာရှိ နှင့် သူမိုက် ခွဲခြားနည်း | မေတ္တာရိပ်
← သမ္ဗုဒ္ဓေ ပါဠိ ဘာသာပြန်
ဓမ္မစကြာ တရားတော် →
ပညာရှိ နှင့် သူမိုက် ခွဲခြားနည်း	Posted on August 22, 2009	by mettayate ဤလက္ခဏာရေး သုံးပါး ရှိသူကား –
ပညာတတ်သူပင်ဖြစ်စေ၊ အမျိုးမြတ်သူပင် ဖြစ်စေ၊ ပစ္စည်းဥစ္စာကြွယ်ဝသူပင်ဖြစ်စေ၊ မင်းအစိုးရသူပင်ဖြစ်စေ၊ မည်သူမဆို ဗာလ (သူမိုက်) ပင်တည်း။
ဤလက္ခဏာရေး သုံးပါး ရှိသူကား –
ပစ္စုပ္ပုန်၊ သံသရာ၊ ဘ၀ အကျိုးနှစ်မျိုးလုံးကိုရခြင်းကြောင့် ပဏ္ဍိတ (ပညာရှိ) မည်၏။ ပညာတတ်သူပင်ဖြစ်စေ၊ အမျိုးမြတ်သူပင် ဖြစ်စေ၊ ပစ္စည်းဥစ္စာကြွယ်ဝသူပင်ဖြစ်စေ၊ မင်းအစိုးရသူပင်ဖြစ်စေ၊ မည်သူမဆို ဤလက္ခဏာရေး သုံးပါးနှင့် မပြည့်စုံလျှင် ပဏ္ဍိတ (ပညာရှိ) မဆိုအပ်ပေ။
အညွှန်း – ဦးသက်စိန် မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာ့အခြေခံ စာအုပ်။
This entry was posted in ဆုံးမသြ၀ါဒများ and tagged အရှင်ဇ၀န(မေတ္တာရှင်)ရွှေပြည်သာ. Bookmark the permalink.	← သမ္ဗုဒ္ဓေ ပါဠိ ဘာသာပြန်
One Response to ပညာရှိ နှင့် သူမိုက် ခွဲခြားနည်း
SoeWinHtut says:	June 22, 2010 at 7:48 am	Dear friends,
3 x Sadhu & Thanks you for your sharing!!
I’d also like to share the Mogok Sayadaw Gyi Dhamma talks of How to classify the wise & stupid one?လူမိုက် နှင့် လူလိမ္မာ ခွဲခြားပုံ) in this link: (http://www.mediafire.com/?mmzncn22ydn)
in order to know more & more details.